अआश्चर्य दृश्यभन्दा पृथक
हिमालय शृङ्खलाको दर्शन अआश्चर्यजनक होइन। दशगजाको आसपासबाट हिमालयको दृश्य देखिनु पृथक आश्चर्य हो।
दुई भिन्न धरातलका एकै यथार्थ हुन्। गत हप्ता हिमालय शृङ्खलाको दर्शन भएपछि सामाजिक सञ्जाल र केही भारतीय चर्चित अखबारहरूले दुवै पृथक आश्चर्यलाई प्रस्तुत गरे।
जनकपुरका कलाकार उपेन्द्रभगत नागवंशी, सर्लाहीको बलराबाट पत्रकार चन्द्रकिशोर र रौतहटको गेंडहीगुठीबाट उत्तरका हिमालय शृङ्खलाको दृश्य देखिएका फोटाहरू नै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक ग¥यौं। दैनिक जागरणलगायतका भारतीय चर्चित दैनिक अखबारहरूले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रबाट हिमालयको दृश्य देखिएका फोटा तथा खबरहरू प्रकाशित गरे। साथै विभिन्न व्यक्तित्वका विचारहरू पनि प्रवाहित गरे।
हिमाल देखिनु अआश्चर्यजनक हो। चालीस उमेर काटेकालाई यसो लाग्नु स्वाभाविक छ। मलाई राम्ररी सम्झना छ, आकाश सफा हुँदा यो नियमित दृश्य थियो। वर्षापछि पहाडतिर पनि बादल नभएको बेला मुख्यगरी बिहान र साँझतिर हेरेर रमाउने दृश्य थियो। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको अलिकति मात्र दक्षिणमा निर्माण भएको बाँधबाट पनि यो दृश्य धेरैपटक देखेको सम्झना छ। बैरगनिया छिर्ने मूल नाकाभन्दा केही पश्चिमतिर बाँधबाट धेरैपटक साथीहरूसँग मुख्यगरी साँझपख हिमालय देखेर रमाएको छु। यसै कारण भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न विद्वान्हरूले आफूहरूले पहिले हिमालयको दर्शन सामान्य रहेको बताउँदै अआश्चर्यजनक रहेको विचार व्यक्त गरेका छन्।
एकथरीले त हिमालयको दृश्य नदेखिएको पनि बताइरहेका छन्। ती नवयुवाहरू जसले दृश्यपान गरेर नयनलाई तृप्त पार्न र मनमस्तिष्कमा दृश्याङ्कन गर्न सकेनन्, तिनीहरूले दुःखेसो पोख्नु अस्वाभाविक होइन। आफूले देख्न नपाएको भन्ने आक्रोशले जन्माएको अविश्वास पनि हुन सक्छ। आफ्नो आँखाले देख्न पाएको कुरालाई सत्य मान्ने र अरूको बोलीको सत्यलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति पनि हुन सक्छ। अर्को कारण यो पनि हो कि जसले कहिल्यै कतैबाट हिमाल देखेका छैनन्, उसलाई हिमाल कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नै छैन। त्यस दिनको दृश्य पनि छुट्यो। सोझोरूपमा हेर्दा चुरे पर्वत शृङ्खला, महाभारत पर्वत शृङ्खला र त्यसपछि हिमालय शृङ्खला हो। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको आसपासबाट त चुरे नै ठूलो देखिन्छ र कतिपय ठाउँमा महाभारतलाई छेकेको हुन्छ चुरेले। यो दृश्य देख्नेको मनोविज्ञानमा हिमालय त निकै टाढा छ र यहाँबाट देखिंदैन भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन। यदि कसैले हिमालय देखेको भन्दछ भने मिथ्या लाग्नु स्वाभाविक हो।
नवयुवाहरूको लागि भने आश्चर्यजनक नै छ। जसले सफा र स्वच्छ हिमालयको दृश्य देखे, जसको लागि अभूतो थियो, आश्चर्यजनक हुनु स्वाभाविक हो। कहिल्यै नदेखेको आश्चर्य जो देखिएको थियो। हिमालयभन्दा धेरै टाढाबाट हिमालय शृङ्खलाको दर्शन। त्यस दर्शनमा अनुमानले नै यो फलानो हिमाल हुनुपर्छ र यो चाहिं फलानो हिमाल । नाम जानेका र जिल्ला थाहा भएका हिमालसित नाम जोडेर साथीभाइबीच सुखद आश्चर्यको वितरण हुनु आपैंmमा पनि सुखद थियो। सुख दिने दृश्यको फोटो धेरैले खिंचे। धेरैले आफ्नो घरपरिवारमा देखाए। धेरैले हिमालसित परिचित गराए। कतिपयले आफ्ना बालबालिकालाई हिमालको दृश्य देखाएर भने– पहिले पहिले यो सामान्य थियो तर वातावरणमा प्रदूषण बढ्दै जाँदा यो दृश्य अलप भइसकेको थियो। अहिलेको मौसमले यस दृश्यसित साक्षात्कार गर्ने मौका प्राप्त भएको छ।
हुन पनि हो। अहिलेको मौसम गज्जबको छ। मौसमप्रति व्यङ्ग्य गर्दै एकजनाले लेखेका छन् – “क्यालेन्डर हेर्दा वैशाख, दिउँसोको झरी हेर्दा असार तथा साँझको अवस्था हेर्दा कात्तिकजस्तो लाग्छ। अझ समयसमयमा भइरहने दीपावलीले त पूरा कात्तिककै झल्को दिन्छ। बिहानीपखको जाडोले यसको पुष्टि गरेको छ।” अहिलेको जस्तो मौसम कहिल्यै नभोगेको बताउनेहरू पर्याप्त छन् । स्थानीय मौसमको बारेमा धेरैलाई दुर्लभ संयोगहरू निकै कम सम्झना हुन्छ। मधेसमा बुद्ध पूर्णिमाको राति जूनलाई हेर्दै सिरक ओढ्नुपर्ने बेमौसमी यथार्थ कतिलाई सम्झना छ कुन्नि तर अहिलेको यथार्थ अबका दिनमा फेरि अआश्चर्यजनक बन्ला कि नबन्ला ? भविष्यको गर्भमा लुकेको छ उत्तर।
अहिलेसम्म जाडो बेमौसमी यथार्थ हो तर यस बेमौसममा वातावरणीय स्वच्छता सुखद आश्चर्य हो। वातावरणीय स्वच्छताको कारण नै हिमाल देखिएको हो। वातावरण कतिसम्म स्वच्छ भएको छ भने विगत कैयौं दशकमा यस प्रकारको स्वच्छताको मापन गरिएको थिएन। विश्वका ठूला र घना शहरहरूको आकाश पनि छ्याङ देखिन थालेको र स्वच्छ हावामा साँस लिन पाइरहेको खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा आउन थालेका छन् । कोरोनाको कहरले विश्वमा उद्योग तथा सवारीसाधनको सञ्चालनमा आएको कमी अर्थात् समग्र यातायात क्षेत्र करीब ठप्प हुँदा वातावरणमा धूवाँको मात्रा ह्वात्तै कम भएको हो। अहिले हवाईजहाज, रेल, बस, मोटर तथा बाइकसम्म बन्द छन्। मानिस घरबाट पनि अन्य सामान्यावस्थाजस्तो सजिलो गरी निस्कन्नन्। यसले प्रदूषणको स्तरलाई कम गरेकै छ, साथै निरन्तर वर्षा पनि भइरहेको छ। वर्षाले गर्दा आकाश सफा हुन्छ।
प्रदूषण कम र वर्षा भएर वातावरण स्वच्छ हुँदा अर्को सत्य पनि देखिएको छ । अस्पतालहरूमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा बिरामीको चाप निकै कम छ। अस्पतालहरू उदास छन्। अस्पतालहरूको उदासीले अर्थतन्त्र थलिए पनि गरीबको स्वास्थ्य चाहिं पहिलेको तुलनामा केही सुध्रिएको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सहजता प्रदान गरेको छ। बिरामी भएर पनि अस्पतालमा आउन नसकेको वा आउन नचाहेको अवस्था त पक्कै पनि छैन किनभने गाउँघरमा पनि विगतका वर्षहरूमा भन्दा मानिस यसपटक बिरामी नै नपरेको बताउन थालेका छन्। अनेक आश्चर्यहरूबीच यसलाई सुखद आश्चर्य नै मान्नु मनासिब हुन्छ।
कोरोना आपैंmमा आश्चर्य र रहस्य भएको छ, विश्वको लागि। कोरोनाकालमा अरू पनि आश्चर्यहरू भइरहेका छन्। यही आश्चर्यको शृङ्खलामा हिमालयको दर्शन पनि पर्न गएको छ, संयोगवश। हिमाल जहाँको तहीं छ। युगौंयुगदेखि त्यसले मानिसले भोगेका अनेक दुःख, पीडा, सुख र आश्चर्यहरू त्यसैगरी उभिएरै हेरेको छ, तर पनि मौन छ। यस्ता कैयौं महामारी भोगेको होला हिमालले। सबै सुख, दुःख र उत्साहदेखि टाढा हिमाल कुनै ज्ञानीको ध्यानमुद्रामा जस्तो देखिन्छ शान्त। बस किन हो किन त्यस दिन धेरैलाई लागेको थियो, हिमाल एक्कासि मुस्कुराएछ। हिमालले दर्शन दिए छ, सर्वसाधारणलाई । हिमाल अदृश्य हुने त होइन तर बादल, धूवाँ, धूलो, तुँवालो आदि आँखा र हिमालको बीचमा आइदिन्छ। सयौं किलोमिटर टाढा रहेको हिमालको बीचमा कुनै एक ठाउँमा बाक्लो गरी केही आइदिएमा हिमाल देखिंदैन। अर्थात् हिमाल अदृश्य हुन्छ। हिमाल मुस्कुराएको देखिन्न। हिमालको मुस्कान त्यस दिनदेखि फेरि अदृश्य छ।
अब धेरैजना त्यस अदृश्य भइसकेको दृश्यको खोजी गरिरहेका छन्।
सम्भवतः हरेक साँझ त्यस दृश्यको खोजी हुन्छ, मनभित्र एउटा चाहना लिएर। र यस चाहनाभित्र हिमालयप्रतिको अनन्त प्रेमको दर्शन पनि पाइन्छ। साँच्चै सीमाञ्चलका मानिसहरूमा रहेको हिमालयप्रतिको प्रेमकै कारण त हो नि हिमालयको दर्शनप्रतिको अविश्वास र विश्वास दुवै।
सीताको पूर्वजन्म र पुनर्जन्ममा रावण
on 4:16:00 PM0Comment
आज सीता जयन्ती हो। अवस्था सामान्य भएको भए आजको दिन कम्तीमा दुई किसिमका कार्यक्रमहरू हुन्थे । पहिलो त जनकपुरमा भव्य कार्यक्रम हुन्थ्यो, जसरी पहिलेदेखि हुँदै आएको छ र अन्य शक्तिपीठहरूमा पनि सीतालाई सम्झिइन्थ्यो तथा घरघरमा पूजा गरिन्थ्यो। कोरोनाकालले सबैजसो चाडपर्व र उत्सवहरूलाई प्रभावित पारेको वर्तमानमा सीता जयन्ती पनि प्रभावित हुनुलाई स्वाभाविक मानिएको छ। यसले यसको प्रचारप्रसारमा पनि कमी आएको मानिएको छ तर घरघरमा भने पूजा हुने कुरालाई केही हदसम्म मात्र प्रभावित भएको स्वीकार्न सकिन्छ । दोस्रो हो, केही वर्षदेखि सीता जयन्तीको दिन औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मनाउनु। केही वर्षदेखि सीता जयन्ती मनाउने अभ्यास पनि भइरहेको छ। राजधानी काठमाडौं तथा प्रदेश २ का अन्य ठाउँमा सीता जयन्तीलाई सम्मानपूर्ण किसिमले मनाउने इतिहास बन्न थालेको थियो।
बिस्तारै सर्वसाधारणले पनि बुभ्mदै गएका थिए– रामनवमीको एक महीनामा जानकीनवमी आउँछ। चैत शुक्ल नवमीमा रामको जन्म भएको र वैशाख शुक्ल नवमीमा सीता अर्थात् जानकीको जन्म भएको हो। विश्वभर महिलाको राजनीतिक महŒव बढ्दै गएको र महिला दिवसहरू मनाउनेक्रम बढिरहेको तथा महिलाको सम्मानमा वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा हिन्दूजगत्मा प्रख्यात नारी सीताको जन्म दिवसलाई विशिष्ट किसिमले मनाइनुलाई स्वाभाविक मानिएको थियो। अझ यही प्रदेशलाई सीताको जन्मथलोको रूपमा चिनाइएको वा सीताको घर भएको वा सीताको बाल्यकाल बितेको स्थलको रूपमा चिनाइँदा सीताको बारेमा जान्न चाहने विश्वले यस प्रदेशको बारेमा पनि जान्न पुगेको हुन्थ्यो र हुन्छ।
हिन्दू मिथक तथा धर्मशास्त्रहरूमा रामलाई विष्णुको अवतारको रूपमा चिनाइएको पाइन्छ तर सीतालाई भने लक्ष्मीको रूपमा चिनाइएको उतिसारो मिथक पाइन्न। समाजमा प्रचलित विभिन्न मिथकहरूमा सीतालाई कतै रावणकी छोरी त कतै के भनेर चिनाइन्छ। मिथक त सामाजिक परिवेश अनुसार फरक हुन सक्छ। मिथकको सामाजिक आधारबाहेक अन्य कुनै प्रामाणिकता हुँदैन वा यसमा प्रामाणिकता हुनै पर्दछ भन्ने होइन। तर रावणसित सीताको सम्बन्ध कम्तीमा दुई जन्ममा देखिएको चर्चित ग्रन्थ रामायणमा नै रहेको छ।
रामायणलाई आदिकाव्य पनि भनिन्छ। अझ वाल्मीकीय रामायणलाई रामायणमध्ये पनि पुरानो रामायण मानिन्छ। यद्यपि वाल्मीकीय रामायणलाई आर्षरामायण पनि भनिएको पाइन्छ। वाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायणको मूलस्वरूपको विषयमा पनि भिन्न विचारहरू पाइन्छन्। अहिले बजारमा गीताप्रेस गोरखपुरको श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण सजिलै बजारमा पाइन्छ। वाल्मीकीय रामायणलाई हिन्दीमा अर्थसहित गीताप्रेसले प्रकाशन गरेको छ। गीताप्रेसले वाल्मीकीय रामायण तीन लाखभन्दा बढी प्रति छापिसकेको छ विभिन्न संस्करणहरूमा । यसबाट पनि यस प्रकाशनप्रति सर्वसाधारणको विश्वास वृद्धि भएको छ। उत्तर भारतमा त गीताप्रेसको धार्मिक पुस्तक प्रकाशनमा करीब एकछत्र राज्य छ र पाठकहरूमा पनि करीब सम्पूर्णतः विश्वास रहेको छ ।
रामायणको मुख्य कथानकमा सीतालाई रावणले वनबासको समयमा पञ्चवटीबाट छलपूर्वक अपहरण गरेर लैजान्छ। सीतालाई अपहरण नगरेको भए शायद रावणवध हुँदैनथ्यो होला वा कथानकले त्यस्तो किसिमको मोड लिंदैनथ्यो होला। रामायणलाई महाकाव्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सीतालाई मुख्य नायिका र रावणलाई खलनायक मान्नुपर्ने देखिन्छ। राम त अधिकांशको नजरमा नायक नै हो। उनलाई समाजले मर्यादा पुरुष वा मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर मान्दछ। यस विषयमा धेरै तर्क गर्नुको औचित्य छैन अहिले।
सीतालाई अपहरण गरेर लङ्काको अशोकवाटिकामा राखेको रावणले सीतासित बारम्बार विवाहको प्रस्ताव राख्दछ तर सीताले अस्वीकार गरेको सबैले बुझेका छन्। सीताकै कारण लङ्काको विनाश हुने कुरामा रावणका आफन्तहरू पनि ढिलो चाँडो बुझेको देखिन्छ।
वाल्मीकीय रामायणमा भने सीताको पुनर्जन्म भएको र रावणकै कारणले पूर्वजन्ममा सीताले अग्निप्रवेश गर्नुपरेको रोचक प्रसङ्ग रहेको छ। अर्थात् सीताको पूर्वजन्म र पुनर्जन्म दुवैमा रावणको भूमिका रहेको छ। संयोगले दुवै जन्ममा रावण खलपात्रकै रूपमा रहेको वाल्मीकीय रामायणले स्पष्ट पारेको छ ।
वाल्मीकीय रामायणको उत्तरकाण्डे सप्तदशः सर्गमा भनिएको छ–
महाबाहु रावण भूतलमा विचरण गर्दै हिमालयको वनमा आएर त्यहाँ सबैतिर चक्कर लगाउन थाले। त्यहाँ उनले एक तपस्विनी कन्यालाई देखे, जसले आप्mनो जीउमा कालो मृगचर्म र शिरमा जटा धारण गरेकी थिइन्। उनी ऋषिप्रोक्त विधिले तपस्यामा संलग्न भएर देवाङ्गनासमान उद्दीप्त भइरहेकी थिइन्। उत्तम एवं महान् व्रत पालन गर्ने तथा रूप–सौन्दर्यले सुशोभित कन्यालाई देखेर रावणको चित्त कामजनित मोहको वशीभूत भयो। उनले अट्टहास गर्दै सोधे– भद्रे १ तिमी आप्mनो यो युवावस्थाको विपरीत कस्तो काम गरिरहेकी छ्यौ ? तिम्रो यो दिव्य रूपको लागि यस्तो आचरण कदापि उचित छैन। तिम्रो यस रूपको तुलना कहीं पनि छैन। यो पुरुषको हृदयमा कामजनित उन्माद पैदा गर्ने किसिमको छ। अतः तपमा संलग्न हुनु उचित छैन। तिम्रोलागि मेरो हृदयमा यही निर्णय प्रकट भएको छ।
भद्रे १ तिमी कसकी छोरी हौ ? यो कस्तो व्रत गरेकी हौ ? सुमुखी १ तिम्रो पति को हो ? जोसित तिम्रो सम्बन्ध छ, त्यो मानिस यस भूलोकमा महान् पुण्यात्मा छन्। मैले जे सोधेको छु, ती सबै मलाई बताऊ। कुन फलको लागि यो परिश्रम गरिंदैछ ?
रावणले यसरी सोधेपछि तपस्विनी कन्याले जवाफ दिइन्। अमिततेजस्वी ब्रह्मर्षि श्रीमान् कुशध्वज मेरा पिता थिए, जो बृहस्पतिका पुत्र थिए र बुद्धिमा पनि उनकै समान मानिएका थिए। प्रतिदिन वेदाभ्यास गर्ने तिनै महात्मा पिताबाट वाङ्मयी कन्याको रूपमा मेरो प्रादुर्भाव भएको थियो। मेरो नाम वेदवती हो। जब म ठूली भएँ, तब देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस तथा नाग पनि पितासमक्ष पुगेर मलाई माग्न थाले।
महाबाहु राक्षसेश्वर १ पिताजीले तिनीहरूको हातमा मलाई सुम्पेनन्। यसको कारण के थियो, त्यो पनि भन्दैछु ।
पिताजीको इच्छा थियो कि तीनै लोकका स्वामी देवेश्वर भगवान् विष्णु मेरा ज्वाइँ बनून्। यसै कारण उनी अरू कसैको हातमा मलाई दिन चाहेनन् । उनको यसै अभिप्रायलाई सुनेर बलाभिमानी दैत्यराज शम्भु उनीसित रिसाएर राति पिताजीको हत्या गरिदिए । यसबाट मेरी मातालाई निकै दुःख भयो र पिताजीको शवलाई हृदयसित लगाएर चिताको आगोमा प्रविष्ट गरिन्। त्यहीं बेलादेखि मैले प्रतिज्ञा गरें कि भगवान् नारायणप्रति पिताजीको जे मनोरथ थियो, त्यसलाई मैले पूरा गर्नेछु। यस कारण उनैलाई म आप्mनो हृदयमन्दिरमा धारण गर्दछु। यही प्रतिज्ञा गरेर यो महान् तपस्या गरिरहेकी छु। तपाईंको प्रश्नानुसार मैले सबै कुरा बताएँ। नारायण नै मेरा पति हुन्। ती पुरुषोत्तमबाहेक अरू कोही पनि मेरा पति हुन सक्दैनन्। उनै नारायणदेवलाई प्राप्त गर्नको लागि मैले यो कठोर व्रतको आश्रय लिएकी हुँ।
राजन् १ पोलस्त्यनन्दन १ मैले तपाईंलाई चिनिसकेकी छु। तपाईं जानुस् । त्रिलोकमा जे कुनै वस्तु विद्यमान छन्, ती सबैलाई म तपस्याद्वारा जान्दछु।
यो सुनेर रावण कामबाणले पीडित भई विमानबाट ओर्ले र उत्तम तथा महान् तपस्या गर्ने कन्यासित फेरि भने– तिमी गर्विली छौ र त तिम्रो बुद्धि यस्तो भएको छ। यस किसिमको पुण्यको सङ्ग्रह बूढी महिलालाई सुहाउँछ, तिमीजस्तो युवतीलाई होइन। तिमी त सर्वगुणसम्पन्न एवं त्रिलोकीकी अद्वितीय सुन्दरी हौ। तिमीले यस्तो कुरा गर्नु नपर्ने हो। तिम्रो जवानी बितिरहेको छ। भद्रे १ म लङ्काका राजा हुँ। मेरो नाम दशग्रीव हो। तिमी मेरी भार्या बन र सुखपूर्वक उत्तम भोग (सुख) भोग गर। पहिले यो बताऊ कि तिमी जसलाई विष्णु भन्दैछौ, ती को हुन् ? तिमी जसलाई चाहेकी छ्यौ, ऊ बल, पराक्रम, तप र भोग–वैभवद्वारा मसँग तुलना गर्न सक्दैन।
रावणले यति भनेपछि कुमारी वेदवती उक्त निशाचरसित भनिन्– यसरी नभन्नुस्। भगवान् विष्णु तीन लोकका अधिपति हुन्। सारा संसार उनको चरणमा मस्तक निहुराउँछन्। तपाईंबाहेक अर्को कोही छैन, जो बुद्धिमान भएर पनि उनको अवहेलना गर्छन्।
यति भनेपछि उक्त राक्षसले वेदवतीको कपाल समातिहाले। जब रावणले वेदवतीको कपाल समाते, तब वेदवतीलाई असह्य रिस उठ्यो र आप्mनो हातलाई नै तरबार बनाइ तत्काल कपाललाई काटिन् र कपाललाई मस्तकबाट अलग्याइन्।
सा ज्वलन्तीव रोषेण दहन्तीव निशाचरम् ।
उवाचाग्निं समाधाय मरणाय कृतत्वरा।।२९।।
अर्थात्, वेदवती रिसले प्रज्वलितजस्ती भइन्। जलेर मर्न उतावली बनी अग्निको स्थापना गरेर त्यस निशाचरलाई नै पोल्नेभैंm गरी बोलिन्–
निच राक्षस १ तैंले मेरो तिरस्कार गरिस्। अब यस जीवनलाई सुरक्षित राख्नु मेरो अभीष्ट होइन। तिमीले देख्दादेख्दै म अग्निमा प्रवेश गर्नेछु। तिमी पापात्माले यस वनमा मेरो अपमान ग¥यौ । यसैले तिम्रो वधको लागि म फेरि उत्पन्न हुनेछु। स्त्रीले आप्mनो शारीरिक शक्तिले कुनै पापाचारी पुरुषको वध गर्न सक्दिन। यदि म तिमीलाई शाप दिन्छु भने मेरो तपस्या क्षीण हुनेछ। यदि मैले केही पनि सत्कर्म, दान र होम गरेकी छु भने अर्को जुनीमा म सती–साध्वी अयोनिजा कन्याको रूपमा प्रकट होउँm तथा कुनै धर्मात्मा पिताकी पुत्री बनूँ। यति भनेर उनी प्रज्वलित अग्निमा प्रवेश गरिन्। त्यतिबेला उनको चारैतिर आकाशबाट दिव्य पुष्पवर्षा हुन थाल्यो।
तदन्तर अर्को जन्ममा उनै कन्या पुनः एक कमलबाट प्रकट भइन्। त्यसबेला उनको कान्ति कमलकै समान सुन्दर थियो। त्यस राक्षसले पहिलेभैंm फेरि त्यहाँबाट उक्त कन्यालाई प्राप्त ग¥यो । कमलको भित्री भागजस्तै सुन्दर कान्तिवाली कन्यालाई लिएर रावण आप्mनो घर गए। त्यहाँ उनले मन्त्रीलाई उक्त कन्या देखाए। मन्त्री चाहिं बालबालिकाको लक्षणहरू जान्ने थिए। उनले राम्ररी हेरेर रावणसित भने– “राजन् १ यो सुन्दरी कन्या यदि घरमा रहन्छे भने तपाईंको वधको कारण बन्नेछ, यस्तो लक्षण देखिएको छ।”
यो सुनेर नै रावणले कन्यालाई समुद्रमा फालिदिए। तत्पश्चात् भूमिलाई प्राप्त गर्दै (सम्भवः जमीनमा छोइएर वा जमीनमा गाडिएर) राजा जनकको यज्ञमण्डपको मध्यवर्ती भूभागमा पुगिन् । त्यहाँ राजा जनकको हलोको मुखभागले जोत्दा उही सती साध्वी कन्या फेरि प्रकट भइन्।
एवमेषा महाभागा मत्र्येषूत्पत्स्यते पुनः।
क्षेत्रे हलमुखोत्कृष्टे वेद्यामग्निशिखोपमा।।४२।।
यसरी यी महाभागा देवीले विभिन्न कल्पमा पुनः रावणवधको उद्देश्यले मत्र्यलोकमा अवतीर्ण हुनेछ। यज्ञवेदीमा अग्निशिखासमान हलोबाट जोतिएको क्षेत्रमा यस कन्याको आविर्भाव भएको हो।
वेदवती पहिले सत्ययुगमा प्रकट भएकी थिइन्। फेरि त्रेतायुग आएपछि उक्त राक्षसको वध गर्न मिथिलावर्ती राजा जनकको कुलमा सीतारूपमा अवतीर्ण भइन्। सीता (हलो जोत्दा भूमिमा बनेको रेखा)बाट उत्पन्न भएको कारण मानिस यस देवीलाई सीता भन्दछन्।
रावणवधको कारण सीता बनेको कथानक त रामायणको मूल कथानकमा रहेको सबैले बुझेकै छन्।
सीता जयन्तीको दिन यो आलेख सीताप्रति श्रद्धा राख्नेहरूका लागि उपयोगी होला। अहिले टेलिभिजनमा पनि उत्तर रामायण चलिरहेको छ र झन्डै तीन दशकमा आएको रामायणले दर्शकको मन तानिरहेको छ।
एउटा संयोग मान्नुपर्दछ, दुवै जन्ममा अग्निप्रवेशको सन्दर्भ फरक सन्दर्भमा भएपनि आएको छ र दुवै जन्ममा रावण आएको देखिन्छ।
मृत्योन्मुखी संवत्को जीवन
on 4:45:00 PM0Comment
यदि परम्परा र शास्त्रहरूलाई आधार मान्ने हो भने अहिले विक्रम संवत् २०७७ हो र विक्रम संवत् २०७६ को समाप्ति करीब तीन हप्तापहिले नै भइसकेको छ।
वास्तवमा विक्रम संवत्को नयाँ वर्ष चैत शुक्ल प्रतिपदादेखि हुन्छ। यस वर्षको चैत शुक्ल प्रतिपदा गत चैत १२ गते नै थियो।
विक्रम संवत्मा हरेक महीनाको पहिलो दिनलाई सङ्क्रान्ति भनिन्छ। यसरी हरेक महीनाको पहिलो दिन सङ्क्रान्ति हुने भएकोले १ गतेलाई त्यस महीनाको सङ्क्रान्ति मानिएको हो तर वास्तवमा सङ्क्रान्ति भनेको हरेक महीनाको शुक्ल प्रतिपदा हो।
चन्द्रमासमा महीनाको गणना सजिलो होओस् भनेर पूर्णचन्द्र अर्थात् पूर्णिमाको दिनको भोलिपल्टबाट मान्ने गरिएको पाइन्छ। पूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि कृष्ण पक्ष शुरू हुन्छ र पन्ध्र दिनपछि शुक्ल पक्ष शुरू हुन्छ। कृष्ण पक्षको अन्तिम दिन चन्द्रमा अलिकति पनि उदाउँदैन भने शुक्ल पक्षको अन्तिम दिन रातभर चन्द्रमा आकाशमा रहन्छ। कृष्ण पक्षको अन्तिम दिनलाई औंसी र शुक्ल पक्षको अन्तिम दिनलाई पूर्णिमा भनिन्छ।
शास्त्रहरूमा कृष्ण पक्षलाई वदी र शुक्ल पक्षलाई सुदी भनिएको पाइन्छ। नेपालमा पनि विक्रम संवत्लाई आधिकारिक संवत्को रूपमा राजा रजौटाहरूले प्रयोग गरेपछि पनि वदी र सुदी प्रयोग गरेको देखिन्छ अर्थात् वर्ष, महीना र दिन बुझाउँदा पक्ष पनि उल्लेख गर्नुपर्दथ्यो, गतेको चलन थिएन। गतेको ठाउँमा तिथि लेखिन्थ्यो। जस्तो २०७६ चैत २९ गतेलाई जनाउनुपर्दा २०७७ वैशाख वदी ४। वदी ४ को अर्थ हो कृष्ण पक्षको चौथो दिन अर्थात् चतुर्थी तिथि। कृष्ण र शुक्ल पक्ष दुवैमा जम्मा १५/१५ दिन हुने भएकाले वर्ष र महीनापछि वदी वा सुदी लेखेर तिथि जनाउने अङ्क लेखिन्थ्यो। यसरी एक महीनाको तीस दिन छुट्याइन्थ्यो।
विक्रम संवत् कसले चलाएका हुन् भन्ने विषयमा विवाद पाइन्छ। विक्रम संवत्को सुरुआत भारतको उज्जैनका राजा विक्रमादित्य (वास्तविक नाम राज विक्रम)ले चलाएका हुन् भन्ने एउटा तथ्य भेटिन्छ भने सूर्यवंशी लिच्छवि वंशका राजाहरूलाई विक्रमादित्य उपाधि दिइएको र तिनीहरूले विशालनगर तथा बत्तीसपुतलीमा राजधानी बनाइ शासन शुरू गरेको बेलादेखि विक्रम संवत्को उठान भएको तर्क दिने अर्को तथ्य पनि रहेको छ। अन्य स्थानमा पनि विक्रम वा विक्रमादित्य राजा भएकोबारे इतिहास नपाइने होइन।
विक्रम संवत्को सुरुआतको विषयमा विवाद आफ्नै ठाउँमा छ तर नेपालको विक्रम संवत्को वर्तमान स्वरूप निर्माणको श्रेय चन्द्र शमशेरलाई छ। तिथिहरू गडबड भइरहन्छ। व्यवहारमा पनि कुनै एक दिनमैं दुई तिथि भएको पनि पाइएको छ र कुनै समयमा दुई दिन एक तिथि भएको पनि पाइन्छ। यसले गर्दा महीनामा पनि गडबड भइरहने हुन्थ्यो। यस समस्याको समाधान गर्न चन्द्र शमशेरले देशभरका प्रमुख ज्योतिषीहरूलाई बोलाइ तिथि र वारमा कुनै तलमाथि नगरी १९६१ मेष सङ्क्रान्ति वैशाख १ गते प्रारम्भ गरी गते लेख्ने चलन चलाएका हुन्। अनि, यसैले औपचारिकता पाएको छ।
औपचारिकरूपमा नयाँ वर्ष २०७७ आइपुग्नै लागेको छ।
गत वर्ष २०७६ को सुरुआत आइतवारका दिन भएको थियो। आइतवारलाई रविवार पनि भनिन्छ। रवि भनेको सूर्य हो। विक्रम संवत्मा जुन दिन वा वार नयाँ सालको सुरुआत हुन्छ, त्यसै दिनलाई वर्षको राजा मान्ने प्रचलन छ। यस कारण वर्ष २०७६ को राजा सूर्य थिए वा छन्।
हाम्रो लोकजीवनमा आइतवार, मङ्गलवार र बिहीवारलाई अलिक कडा वारको रूपमा लिइन्छ। गाउँघरका पढेलेखेका नभएपनि अलिकति सुनेकै भरमा सांस्कृतिक ज्ञान भएकाले सजिलै यी तीन वारलाई अलि कडा वार मान्दछन्। वर्ष २०७६ को सुरुआत आइतवारको दिन भएकोले यो वर्ष कडा हुने अनुमान गरेका थिए।
औपचारिकरूपमा २०७७ सोमवारबाट शुरू हुँदैछ। यस दृष्टिकोणले वर्ष २०७७ को राजा स्वतः सोम हुन्छन् । सोमको अर्थ हुन्छ चन्द्रमा। चन्द्रमा आपैंmमा शीतल हुन्छ। यसको अर्थ सौम्यता र उल्लास पनि हुन्छ। यद्यपि शास्त्र वा परम्परा अनुसारको वर्ष २०७७ गत २०७६ चैत १२ का दिन नै आरम्भ भइसकेको छ। तर अत्यधिक कार्यमा लागेको नाम नै सार्थक मानिएको हुन्छ। यस कारण सोम अर्थात् चन्द्रमा नै यस वर्षको राजा हुने देखिन्छ।
आधिकारिक ज्योतिषीय मान्यता होइन तर सोमवारबाट वर्षको आरम्भ भएको हुनाले यस वर्ष केही राम्रो होला भन्ने विश्वास ग्रामीण समुदायमा रहेको छ।
नयाँ वर्षको सुरुआत हुनुभन्दा पहिले अहिले जुन वर्ष २०७६ को अन्त्य हुँदैछ, यो ज्यादै दुःखद छ। विश्वले चरम पीडा भोगिरहेको छ। चरम पीडाका दिनहरू विश्व समुदायलाई यो वर्षले दिएको छ। इतिहासको बाटोमा यस वर्षको कालो अनुहार देखिनेछ।
आजको विज्ञान, प्रविधि र चिकित्सा विज्ञानमा यति धेरै उन्नति गरिसकेको विश्वलाई पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले धेरै ठूलो धक्का दिएर जाँदै गरेको यस वर्षले विश्वको अर्थतन्त्रमा ठूलो भुइँचालो ल्याइदिएको छ। मानव जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएको छ भने चिन्तनशैलीमा पनि प्रभाव पारेको छ। यसले कला र साहित्यलाई पनि अप्रभावित राख्न सकेन । संस्कृतिमाथि विश्वव्यापी हस्तक्षेप गरेको छ। चिकित्साविज्ञानका वैज्ञानिकहरूमाथि नयाँ चुनौती थपिदिएको यस वर्षले विश्वको इतिहासमा मानिसलाई घरभित्रै रहनुपर्ने नयाँ अध्याय थपेको छ।
यस वर्षले विश्वमा केही राजनीतिक उतारचढाव ल्याएको छ तर नेपालमा भने खासै कुनै राजनीतिक नयाँपन ल्याएको देखिएन। हरेक दृष्टिकोणले सामान्य वर्षको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्दै लगेको २०७६ ले अन्त भला त सब भला गर्न सकेन। गर्मीको समयमा गर्मी अलि बढी नै रह्यो, वर्षा भने केही कम भयो, जाडो यसपालि धेरै नै बढी भयो। मौसमले आफ्नो रूप देखाएकै हो तर विशिष्ट पहिचान कायम गर्न नसकेकै अवस्थामा यसपालि आँपमा मञ्जरी अलि बढी लागेको थियो। रूखलाई छोप्ने गरी मञ्जरीको मुस्कान हेर्दा लाग्दथ्यो कि यसले एउटा स्मरणीय फल दिएर जान्छ तर मधुआ यसरी आयो कि मञ्जरीलाई कालो बनाएर गयो।
आँपको मञ्जरीलाई यस वर्षको ऐना बनाएर यसको अनुहारलाई देख्न सकिन्छ । दीनहीन, विपन्न श्रमिकहरूलाई यस वर्षले विगत कैयौं दशकमा नभएको कष्टकर जीवन दियो। कर्मशील जीवनको गतिमा एक हदसम्म पूर्णविराम लगाइदियो। करोडौं मानिसको रोजगारमा आघात पु¥यायो। हजारौं हजार मानिसको जीवनमा पनि पूर्णविराम दियो। यो भयङ्कर कालरात्रिजस्तो समय बनाइदिएको यो वर्षले आपैंmदेखि आपैंmमाथि शङ्का उब्जाइदिने बनाइदियो ।
कुनै विद्वान्ले भनेका छन्– जीवनको वास्तविक मूल्याङ्कन चिहानमा हुन्छ। यो वर्षको जीवन यस्तो भइदियो कि यसको चिहानमा मलामी जाने पनि कोही भएन । यसले गर्दा नयाँ वर्ष २०७७ पनि प्रभावित नै भइदियो। नयाँ वर्ष पनि नयाँ वर्षजस्तो हुन दिएन।
मानवजातिले आफ्नो इतिहासमा भोगेका कैयौं कठोर समयको लाममा वर्ष २०७६ लाई सूचीकृत गरेको छ। कामना गरौं, लोकविश्वास सार्थक होओस्, वर्ष २०७७ सुखद र उल्लासमय बनोस्।
तपाईं इमानदार हुनुहुन्छ ?
on 4:33:00 PM0Comment
बालबालिका हरेकको घरमा छन् । बालबालिका नभएको पनि कुनै घर हुन्छ त ? र बालबालिकाले आफ्ना अभिभावकबाट धेरै कुरा सिक्छन्। बालबालिकाले अभिभावकबाट धेरै कुरा सिक्छन् भन्ने कुरोमा विश्वास छ ?
बालबालिकाको नजरमा आफ्ना पिता र माता संसारका सबैभन्दा ठूला वा पूज्य हुन्छन्। बुबाआमाले नै देउतालाई पनि चिनाउँछन्। घरमा देउताप्रति श्रद्धाभाव राख्न र आमाबुबाका साथै आफूभन्दा ठूलाको आदर गर्न सिकाउँछन् । को किन आदरणीय भन्ने प्रश्नको उत्तर बालबालिकाले सबैभन्दा बढी आबाबुबाबाटै सिक्छन्। कुनैपनि बालबालिकालाई उनका आमा वा बुबा बेइमान छन्, ठग छन्, चोर वा बदमाश छन् भन्दा पक्कै हृदयमैं चोट लाग्छ। सकेसम्म प्रतिकार गर्छन् र नसक्ने अवस्थामा आफ्नो आक्रोश वा पीडालाई मनमा दबाएर आफूलाई निरीह पाउँछन् । यस प्रकारका कुराले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा साँच्चै कस्तो प्रभाव पर्छ होला भन्ने विषयमा हामीले कहिले सोच्ने गरेका छौं। आफ्नाअगाडि खेलिरहेका वा पढिरहेका वा आफ्नै धुनमा व्यस्त रहेको बेला आफ्ना सन्तानको अनुहारमा हेर्दै आफूले आफ्नो हृदयलाई प्रश्न गरौं त, के वर्तमानमा तिनीहरूप्रति न्याय गरेका छौं ? के साँच्चै हामीले तिनलाई माया गरेका छौं ? के हामी बालबालिकाप्रति इमानदार छौं ?
बालबालिकाहरूले पनि अनेक माध्यमबाट देशमा कोरोनाको कहर रहेको र संसारमा कोरोनाको महामारीले विपत्ति ल्याएको बुझेका छन्। कोरोनाकै कारणले विद्यालयहरू बन्द भएको र पढाइसम्बन्धी कुनै काम पनि नभएको बुझेका छन्। पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोहरूमा पनि यही कुराले प्रधानता पाइरहेको पनि बुझेका छन्। घरबाट बाहिर निस्कनु राम्रो होइन भनेर सबैतिरबाट आइरहेको सुझावलाई पनि पक्कै सुनेको हुनुपर्छ। अथवा अभिभावकले नै बालबालिकालाई धेरैजनासित नखेल्नू, धेरैसित हात नमिलाउनू, कोही पनि बालबालिकासित अँगालो मार्ने काम नगर्नू, अरूको खेलौना नलिनू भनेको हुनुपर्छ। बालबालिकालाई जति धेरै सक्यो उति धेरै घरमैं बस्न प्रेरित गर्ने अभिभावक चाहिं यस अर्थमा साँच्चै असल हुन् तर बालबालिकालाई घरमैं रहन निर्देशन दिने र आफू चाहिं बारम्बार घरबाट बाहिर निस्कनेहरूले जानजान बालबालिकामाथि दुई किसिमले अन्याय गरिरहेका छन् ।
पहिलो, अभिभावकहरू बाहिर गएर कहाँ र कोसित कसरी भेटिरहेका छन् वा बाहिर कसरी सुरक्षित छन् भन्ने पक्ष महŒवपूर्ण हो। अमेरिका, इटालीलगायतका शिक्षित र विकसित देशहरूमा सामाजिक दूरी (सोसल डिस्टेन्स) मिलाउन कत्तिको समस्या भयो र यस समस्याले अहिले कस्तो विपत् निम्त्याएको छ भन्ने कुरा नेपालकै शिक्षित अभिभावकले नबुझेका होइनन्। हामी घरबाहिर निस्कन्छौं र कहिलेकाहीं दुई/चार जना बसेको ठाउँमा पुगेर किन बसेका छन् भनेर बुभ्mन खोज्छौं। त्यसरी बुभ्mन खोज्ने बहानामा हामी बहसमा सहभागी हुन्छौं र सक्रिय बहसमा अरूहरू पनि बढ्दै जान्छन्। यसले गर्दा अरूलाई पनि छलफल वा बहस गर्न सजिलो हुन्छ तथा सामाजिक दूरी मिलाउन खोजेर पनि मिल्न सक्दैन । यदि एकजनामा सङ्क्रमण छ भने अर्कोमा सर्न कत्तिपनि बेर लाग्दैन। धेरैमा आत्मविश्वास छ कि म सुरक्षित छु। मलाई सङ्क्रमण छैन। सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहनुपर्दछ, यो सबैको कामना हो तर सङ्क्रमण भएकालाई पनि केही दिनसम्म म सङ्क्रमणमा छु भन्ने थाहा हुँदैन। यस अवस्थाले एकबाट अर्कोमा सर्दै गइरहेको हुन्छ। यसरी बाहिर विनाकाम गएको अभिभावकले आफूसित कोरोनालाई कपडामा, जीउका कुनै अङ्गमा वा साँसमा बोकेर आएका हुन सक्छन्, जसबाट परिवारका अन्य सदस्यमा पनि सर्न सक्छ । यदि यस प्रकारको गल्ती जानजान गरिरहेका छौं वा जानाजान बाहिर विनाकाम निस्किरहेका छौं भने बालबालिकामाथि अन्याय गरेका छौं।
दोस्रो, लकडाउनको परिपालन नैतिक बन्धन पनि हो। आत्मसंयम र आत्मानुशासनको एउटा पर्व पनि हो। एउटा राष्ट्रिय धर्म पनि हो। परिवारप्रतिको कर्तव्य पूरा नगर्नेले राज्यप्रतिको कर्तव्य राम्रोसँग निर्वाह गर्छ भन्ने कुरामा विवाद वा बहसको विषय हुन सक्छ तर राष्ट्रिय कर्तव्यमा लापर्बाही गर्ने अभिभावकबाट बालबालिकाले के सिक्ने ? सम्भव भएसम्म राज्यका सबै निकायले घरमैं बस्न आग्रह गरिरहेको भएपनि बारम्बार घरबाट बाहिर निस्कने अभिभावक राज्य वा बालबालिका वा आफ्नो परिवार अथवा समाज कसप्रति बफादार, इमानदार, कर्तव्यनिष्ट छन् ? र आत्मसंयम अपनाउन नसक्ने अभिभावक के आपैंmप्रति, नितान्त आफ्नैलागि पनि इमानदार छन् ? के आफूले विनाकाम बाहिर निक्लेको उसको आत्माले राम्रो मानेको छ ? आफ्नो परिवारलाई स्वच्छ र समस्यारहित देख्न चाहनेले यस प्रकारको लापर्बाही गर्नु उचित हो ?
समाजमा धेरै किसिमका मानिस छन् । स्वास्थ्यको दृष्टिले वर्तमान गम्भीर अवस्थामा सबैबाट सबै प्रभावित हुने अवस्था रहेको छ। यस गम्भीर परिस्थितिमा आफूलाई सभ्य, शिक्षित, समाजसेवी तथा नागरिकप्रति अलिकति जिम्मेवारी भएको ठान्ने बौद्धिकवर्गले पनि आफ्नो परिवारका बालबालिकाको अनुहारलाई हेरेर गम्भीर हुनु यस कारण आवश्यक छ कि कतै आफू बाहिर निस्कँदा आफूलाई देखेर अरूहरू पनि निस्कन्छन् कि ? अरूलाई बाहिर ननिस्कन सल्लाह दिने वर्गले आफू चाहिं घरमा एक दिन पनि राम्ररी टिक्न नसक्दा यसको असर समाजमा नराम्रो परिरहेकोतर्पm बुद्धिजीवीहरूले कहिले गम्भीर भएर सोच्ने ? आमनागरिकलाई आफ्नो उच्च नैतिकताको परिचय शब्दमा दिने कि व्यवहारले नै प्रदर्शन गर्ने ?
साँच्चै घरमैं एउटा नियम बनाऔं त। म कुन कामले बाहिर जाँदैछु भन्ने कुरा आफ्नो कुरा इमानदारीपूर्वक आफ्ना घरका बालबालिकालाई सुनाएर जाऔं। फर्केर आएपछि पनि के के ग¥यौं र कसरी सम्पन्न भयो भन्ने कुरा इमानदारीपूर्वक राखौं त। यदि यसरी गर्न सक्यौं भने समाजमा आफ्नो भूमिकाको विषयमा बालबालिकालाई जानकारी हुन्छ। र यो छुट्टीको दिनमा सम्भव हुन्छ भने आफ्नो हरेक दिनको अनुभूति बालबालिकालाई सुनाऔं र तिनीहरूलाई लेख्न लगाअFैं। बालबालिकाले लेख्ने मौका पाउँछन्। फेरि बालबालिकाले लेखेको कुरा सुन्ने प्रयास गरौं। बालबालिकालाई समय बिताउन सजिलो। आफूलाई इमानदार बनाउन पनि प्रेरणा मिलिरहने। बालबालिकाको सिर्जनात्मक क्षमताको पनि विकास हुने। बालबालिकाको परिश्रमको मूल्याङ्कन पनि हुने।
हैन भने घरबाहिर जथाभावी ननिस्कौं । बालबालिकाले हाम्रो चरित्रबाट सिकिरहेका हुन्छन्। हामी यदि ढाँटेर बाहिर निस्कन्छौं भने हाम्रा बालबालिकाहरूले पनि ढाँट्ने गुण सिक्छन् । पक्कै हामी आफ्ना बालबालिकालाई इमानदार बनाउन खोज्छौं। हामी इमानदार बनाउन चाहन्छौं, यसै कारण हामीले आपैंmलाई पनि इमानदार बनाउनुपरेको छ।
आपैंm चाहिं इमानदार बन्नुपरेको छ र आफ्नै इमानदारीको परीक्षामा आफू नै उत्तीर्ण हुनुपरेको छ। आफ्नो परीक्षामा आपैंm उत्तीर्ण भएर आफ्नो मुहारमा मुस्कान ल्याउँदा त्यो इमानदार मुस्कानको हस्तान्तरण बालबालिकामा हुनेछ।
on 3:35:00 PM0Comment
आजसम्म पनि साहित्यसिर्जनामा सामान्यतया दुुई धार छन्। एउटा धारले साहित्य जीवनको लागि र अर्को धारले साहित्य मनोरञ्जनको लागि हुनुपर्ने तर्क गर्दछन्। र जुन धारको साहित्य भएपनि यथार्थ प्रस्तुत गर्दछ। यथार्थको प्रस्तुतिलाई कतिपयले काल्पनिक रङ दिन्छन् त, कतिपयले आप्mनै यथार्थ हो भन्नेजस्तो पारेर प्रस्तुत गर्दछन्। अझ साहित्यमा वर्तमान त बोलेकै हुन्छ, वर्तमानले साहित्यमा आधिपत्य जमाएकै हुन्छ। साहित्य, कला र संस्कृतिलाई मानव मात्रको सम्पत्ति मानिएको छ।
अहिले मानव समुदाय एउटा अकल्पनीय महामारीबाट गुज्रिरहेको छ । हरेक व्यक्तिको मनमा डर छ। मानव समुदाय संवेदनशील बनेको छ। गम्भीर संवेदनशीलताको यस घडीमा साहित्य सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो। अझ घरमा नै बस्नुपर्ने नैतिक तथा सामाजिक दायित्वले गर्दा सर्जकको मन र मस्तिष्कलाई झङ्कृत बनाएको छ। जब सर्जक संवेदित हुन्छ, तब सिर्जना हुन्छ। सिर्जनाको प्रकाशन विभिन्न माध्यमले गर्दछ। वर्तमान विश्वलाई पनि सिर्जनामा उतारेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा सर्जकहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो एक किसिमले तात्क्षणिक आत्मप्रकाशन नै हो।
कोरोनाविरुद्ध लडाइँलाई विश्वयुद्धको संज्ञा दिइएको हेटौंडाका कवि तथा ‘हाम्रो मातृभूमि साहित्यिक’ त्रैमासिकका सम्पादक देवराज खरेल वर्तमान विश्वलाई यसरी अभिव्यक्त गर्दछन् –
शस्त्रअस्त्रयुक्त एकातिर शस्त्रअस्त्रविहीन एकातिर
एक्लो भाइरस एकातिर आठ अर्ब एकातिर
युद्ध गर्न नचाहिंदो रहेछ औजार र अस्त्रहरू
विश्व एकातिर कोरोना एकातिर।
सामाजिक सञ्जालमा साहित्यिक विचारहरू पर्याप्त आएका छन्। कतिपय सिर्जना अत्यन्त कलात्मक पनि छन्। कतिपयले सरल शब्दमा सर्वसाधारणले बुझ्नेगरी काव्यात्मक भाव अभिव्यक्त गरेका छन्। देशका प्रसिद्ध गजलकार डा घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’ आत्मरक्षा शीर्षकमा वर्तमानलाई यसरी अभिव्यक्त गर्दछन्–
को–ही सुरक्षित छैन अहिले
रो–ग पैmलिएको छ बडवानलभैंm
ना–मकृत कोरोना (कोभिड–१९)को विषाणु,
बहिष्कार सडकको गर्नु छ
नारा, जुलुसलाई नजीक गएर होइन,
टाढैबाट बाईबाई भन्नु छ
दूरी बढाएर आफन्तहरूसँग
नजीक बन्नु छ,
या एकान्त बास होस्
या सुरक्षित निवास होस्
हात मिलाएर होइन
हात जोडेर आत्मीयता दर्शाउनु छ
जसरी पनि भगाउनु छ
घर, परिवार र समाज जोगाउन,
राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्न
अक्षरशः पालन गर्नु छ।
डा परिश्रमीले घरपरिवार र समाजलाई जोगाउँदै राष्ट्रलाई पनि जोगाउन तथा पृथ्वीलाई पनि बचाउन आह्वान गरेका छन्। आत्मरक्षा नै सबैभन्दा ठूलो उपाय भन्ने कुरा जगजाहेर छ। कोरोनाविरुद्ध यस महायुद्धमा विनाहतियार आत्मरक्षा गर्न सकिन्छ र आत्मरक्षा गरेर विश्वयुद्ध जित्न सकिन्छ । यस कारण अहिले घरमा नै बसेर विश्वयुद्ध गर्नुपरेको छ विनाहतियार । अहिलेको समयमा घरभित्र नै जे गर्नुपर्छ गरौं भन्ने सल्लाह आएको छ, परिवारमैं। अझ रमाइलो गर्दै युद्ध लडेको पनि ठहरिन्छ। साहित्यकार रमेश समर्थन यसरी आह्वान गर्दछन्–
सुरक्षा सबले आप्mनै गर्नुपर्ने भयो अब
कोरोनाले समातेको छ सारा दुनियाँ जब
सुतौं, उठौं, बसौं, नाचौं, खेलौं जसो गरौं
घरभित्र गरौं सारा ननिस्कौं है कतै सब ।
वास्तवमा घरभित्रलाई नै केही समय संसार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। घरभन्दा बाहिर सबैतिर त्रासको वातावरण छ। कोरोनाले त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। यसले कुनै पनि वर्ग, सीमा वा धर्मलाई छोडेको छैन। वास्तवमा त्रासको वातावरणले आप्mनो साम्राज्य नै कायम गरेको छ। यसै वातावरणलाई साहित्यकार धनराज गिरीले आप्mनो गजलमा यसरी प्रस्तुत गरेका छन् –
दुलोभित्र सारा – करोना करोना
भयाक्रान्त साथी बनी थर्थराए
वियोगी निरोगी लुके आज जम्मै
भयो बाग रित्तो सखा लर्खराए।
कोरोनाको त्रास सबैतिर छ, तर कतिपय अटेरीहरू छन्, जसले मूर्खता छरिरहेका छन्, सडकभरि। सरकारको आदेश पनि नमान्ने र कोरोनाको त्रास नमान्नेलाई हेटौंडाका कवि सागर खतिवडा भने मूर्खको संज्ञा दिन्छन्। उनकै शब्दमा–
म हेरूँ बजारमा लकडाउन कस्तो रहेछ भनी
घुमेका छन् मूर्खजन सबै अवज्ञा गरी गरी
अटेरी गर्ने ती अबुझ शठदेखि छकपरि
कोरोना खित्का छाडी अभयसित हाँस्यो मरीमरी।
विश्वव्यापीरूपमा कोरोनाले आप्mनो प्रभुत्व जमाइरहेको छ। कोरोना महामारीको रूपमा पैmलिएकोले एक किसिमले जीवनको अनेक क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। समग्र जीवनपद्धतिमा कोरोनाको प्रभाव देखिएको छ। जो जति संवेदनशील छन्, उसको संवेदनामा उति धेरै गहिरो छाप छोडेको छ। तर दिन सधैं एकै किसिमको रहँदैन भन्ने विश्वास कविहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । सधैं अँध्यारोपछि उज्यालोको पालो त आउँछ नै। केही समयपछि फेरि समय अनुकूल हुने आत्मविश्वास कवयित्री रेणुका जिसी खतिवडाको कवितामा यसरी अभिव्यक्त भएको छ–
...यी बन्द स्कूलहरू
खुल्नेछन् र घन्किनेछन् ताराबाजी लै लै
भरिनेछन् केटाकेटीका पैतालाले र
फेरि जाग्नेछन् र दौडाउनेछन्
गन्तव्यमा पुग्न हतार मान्छेहरूलाई
फेरि फर्कनेछ संसारको गति
बग्नेछन् सबैजना आआप्mनै लयमा
बूढापाका अनुहारको मुस्कानले
फेरि भन्नेछ डरको अगाडि जीत हुन्छ
हामीले फेरि जित्यौं।
कविताले यथार्थ पस्किने मात्र होइन, कहिलेकाहीं यथार्थ भयावह हुन्छ, त्रासद हुन्छ। त्रासले त झन् सर्वसाधारणलाई जीवन सरलतापूर्वक बाँच्न केही बाधा पो पु¥याउँछ। हो, कवयित्री खतिवडाले भनेजस्तै त्रासको दिन हराउनेछ र एक दिन फेरि मानिसको जीत हुनेछ। मानिसको जीत हुने विश्वासमा दृढ हुनुपरेको छ। अहिले डर छ र त हामी सतर्क छौं तर डरलाई जितेपछि जीत निश्चित छ। डरको जीत त हुँदैन, डरको पराजय हुने कुरामा सर्वत्र विश्वास रहनुलाई साहित्यको सार्थकता मान्नुपर्दछ । झापाका कवि सुमन कोइरालाले पनि आपूmलाई संसारको दुःखले सताइरहेको बताएका छन्। संसारको दुःख देखेर कवि कोइराला आपूm पनि दुःखी हुन्छन् र भन्छन्–
...अनि संसार रोइरहँदा
मास्क, ग्याँस, चामल र सेनिटाइजरका
काला बजारियालाई हैन
म कवि हैन मित्र
मलाई संसार दुःिखरहन्छ।
हो, कविलाई नै संसार दुख्छ। संसारको चिन्ता हुन्छ। बरु कविले आपूmलाई जति धेरै दुःख छ, त्यसको अभिव्यक्ति कम दिन्छ। आप्mनो संवेदित क्षणलाई कलात्मक पारेर अर्काको बनाइ प्रस्तुत गर्दछ र अरूको पीडालाई आपूm पीडित बनी पस्कन्छ। कहिलेकाहीं आपूm नै अरू पात्र बन्दछ र कहिलेकाहीं अरूको ठाउँमा आपूm पात्र बनी अभिव्यक्ति दिन्छ । तर जब संसार नै पीडामा छ, त्यतिबेला कवि साहित्यकारहरू चुप लागेर बस्नै सक्दैनन्। घरभित्र पनि कवि शान्त भएर, चुप लागेर बस्न सक्दैनन् । संसारको चिन्ता आप्mना सिर्जनामार्पmत् अभिव्यक्त गरिरहन्छन् भन्ने सामान्य उदाहरण मात्र हो। कवि साहित्यकारहरूको अभिव्यक्तिले पनि समाजमा सचेतना आएको र आइरहेको विश्वास यिनै अभिव्यक्तिहरूबाट पाउन सकिन्छ। कवि तथा साहित्यकारहरू समाजको प्रबुद्ध वर्ग भएकाले सङ्कटको यस महाघडीमा आपूmलाई विश्व कल्याणार्थ प्रस्तुत गरेर पनि आप्mनो कर्ममार्पmत् कर्तव्य निर्वाह गरेको स्पष्ट हुन्छ। यसबाट समाजका अन्य वर्गमा पनि आप्mनो कर्तव्य निर्वाहको भाव परोक्षरूपमा सम्प्रेषण भएको देखिएको छ।
मानव समुदायले कोरोनामाथि विजय प्राप्त गरेर आप्mनो स्वाभिमान बचाउने कुरामा विश्वस्त छन् ओखलढुङ्गाका कवि चेतनाथ धमला। उनकै शब्दमा–
एक थोपा पसिनाले कोरोना पखालेर हिमालभैंm उठ्न मन छ
यसैगरी गीत गाउँदै जिन्दगीमा सधैंभरि हिंडिदिन मन छ।
चिन्तन र जीवनशैलीमा हस्तक्षेप
गर्न सफल कोरोनाले साहित्यमा पनि आप्mनो स्थान सुरक्षित पारेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ। फेसबूकहरूमा आएको आत्मप्रकाशन दृष्टान्त हुन्।